त्रिपुरेश्वर आइपुग्यो । लगभग पाँच-सात जना चढे । त्यसमा दुई वृद्धसमेत थिए । वृद्धवृद्धाका लागि ज्येष्ठ नागरिक सिट छुट्याइएको छ । मलाई लाग्छ, सबै मानिस विवेकशील हुने हो भने आरक्षण चाहिँदैन । वृद्धलाई उभ्याएर महिला सिटमा बस्ने महिलाहरु यो मनुवाको आँखाले धेरैपटक देखेको छ । कानुनी आधारमा उनीहरुको सिट महिला नै भएपनि मानवताले भने दिएको हुँदैन । तर, यहाँ ती दुवै कलेजका नानीहरु विवेकशील रहेछन् । उनीहरुले वृद्धवृद्धालाई आफू बसेको महिला सिट छाडिदिए । उनीहरुलाई मैले पनि मनमनै धन्यवाद दिएँ ।
गाडी सोल्टीमोड आइपुग्यो । खलासी भाडा माग्दै आयो ।
‘चिजहरु सबै देखेजस्ता नहुन नि सक्छन्,’ अलिकति दर्शन मिसाएर बोलेँ ।
भोलिपल्ट पनि अफिस गएँ तर, फरक गेटअपमा । पावरवाला चस्मालाई थन्क्याइदिएँ । दाह्री खुर्किए । झोला भिर्न छाडेँ । किनकी मलाई पढन्दास् बन्नु थिएन ।
देवेन्द्रराज पाण्डेको बयान- १० वर्षको प्रयासपछि यसरी जन्मियो पुस्तक
राम, घाम र बदनाम
नाटक ‘बितेका कुरा’को रिर्हसल शुरु
संस्कृत ग्रन्थ मानसखण्ड नेपालीमा प्रकाशित
किशोरको ‘कम्पन’ : यसरी जन्मियो
केपी-पिके दोहोरी (कुटुमा कुटु)
पुस्तक समीक्षा कसरी गर्ने ? हेर्नुहोस् ‘किताबै-किताब’
बिदा काटिएकोमा …
क्रान्तिकारी योद्धा म !
सि जिङपिङको पुस्तक प्रेम, नाकको प्वाल नै कालो हुन्थ्यो बत्तीको धुँवाले
खिचडी सार्वजनिक, खिचडीमा के-के छन् ?
पूर्वको राजनीतिबारे बुझ्ने गतिलो पुस्तक सार्वजनिक